DISTRIKAN’NY BEROROHA : TONGA AO AN-TOERANA NY INTERNET
“𝑻𝒔𝒚 𝒎𝒊𝒔𝒚 𝒊𝒏𝒕𝒔𝒐𝒏𝒚 𝒊𝒓𝒆𝒐 𝒇𝒂𝒓𝒊𝒕𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒌𝒐𝒏𝒚 𝒉𝒐 𝒂𝒅𝒊𝒏𝒐 𝒉𝒐𝒚 𝒏𝒚 𝑭𝒊𝒍𝒐𝒉𝒂𝒎-𝒑𝒊𝒓𝒆𝒏𝒆𝒏𝒂 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒚 𝑵𝒊𝒓𝒊𝒏𝒂 𝑹𝑨𝑱𝑶𝑬𝑳𝑰𝑵𝑨. “
Ho antsika eto Beroroha, tafapetraka eto amin’ny Paositra Malagasy ny connexion internet. Sambany izao, ary hetsika maro no homanin’ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampivoarana ny Haitao ara-kajy mirindra miaraka amin’ny Paositra Malagasy mba ahafahana mampiofana ireo tanora eto an-toerana amin’ny fampiasana ny teknolojia vaovao .
Isan’ireo mahazo tombony amin’izao fahatongavan’ny internet eto Beroroha izao ireo sampandraharaham-panjakana eto an-toerana. Toy ny ministeran’ny serasera, ny fampianarana, ny seha-pahasalamana,ny zandary, sns… na ny fandefasana ireo vaovao aty an-toerana, ny fandefasana ireo atontan-taratasy amin’ny alalan’ny « mail », ireo asa ilaina fifandraisan-davitra sy nomerika rehetra dia azo lazaina fa nahitam-bahaolana amin’izao .
Hisy ny fampiasana izany maimaim-poana tanteraka atolotry ny Paositra Malagasy ho fandraisan-tsika eto an-toerana azy . Na izany aza, mba tsy hamonoana ireo mpandraharaha , NEFA KOSA AO ANATIN’NY FITSINJOVANA TANTERAKA NY VAHOAKA HATRANY dia hisy ny fandaminana tsotsotra mba ikajiana ny fampaharetana ny tetik’asa, ho tombotsoan’ny rehetra.
𝙇𝘼𝙈𝙄𝙉’𝘼𝙎𝘼 𝙃𝙄𝙏𝙎𝙄𝙉𝙅𝙊𝙑𝘼𝙉𝘼 𝙄𝙍𝙀𝙊 𝙊𝙍𝙄𝙉𝘼𝙎𝘼𝙈-𝙋𝘼𝙉𝙅𝘼𝙆𝘼𝙉𝘼 𝙎𝙔 𝙃𝘼𝙉𝘼𝙈𝙊𝙍𝘼𝙉𝘼 𝙉𝙔 𝘼𝙉𝘿𝘼𝙑𝘼𝙉𝘼𝙉𝘿𝙍𝙊𝙈-𝙋𝙄𝘼𝙄𝙉𝘼𝙉’𝙉𝙔 𝙑𝘼𝙃𝙊𝘼𝙆𝘼